လကျသညျးပျေါက လခွမျးလေးတှေ သတိပေးနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး (ရုပျသံ)
HomeKnowledgeလကျသညျးပျေါက လခွမျးလေးတှေ သတိပေးနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး (ရုပျသံ)
လကျခြောငျးလေးတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ လကျသညျးရဲ့ အောကျဖကျ လခွမျးပုံလေး တှကေို သငျသတိထားမိ မှာပါ။ လကျသညျးပျေါက လခွမျးလေးတှရေဲ့ အရောငျ၊ ပုံသဏ်ဍာနျ၊ အရှယျအစားက ရောဂါတဈခုရဲ့ လကျရှိ အခွအေနကေို ညှနျပွပေးနိုငျရုံ မကပဲ ရောဂါရဲ့ပငျကို သဘောကိုပါ ဖျောပွပေးနိုငျပါတယျ။
လကျသညျးပျေါက လခွမျးလေးကို လုံးဝမမွငျရတာ၊ မရှိတာက ကနျြးမာရေး ပုံမှနျဖွဈတဲ့ လက်ခဏာပါ။
- လကျသနျးပျေါက လခွမျးလေးက ကြောကျကပျ၊ အူသိမျ၊ နှလုံးတို့ရဲ့ အလုပျလုပျပုံနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ လခွမျးပိုပွီး ပျေါလှငျလာခွငျးက သှေးတိုးခွငျးရဲ့ ရလဒျပါပဲ။
- လကျသူကွှယျက မြိုးပှားခွငျးနဲ့ သှေးဖွူဥစနဈ တှရေဲ့ အလုပျ လုပျပုံနဲ့ ဆကျစပျနေ ပါတယျ။ လကျသူကွှယျပျေါက လခွမျးကို မွငျရခဲ ပါတယျ။မွငျရရငျတော အစာခွမှေု စနဈနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွဿနာ ရှိလို့ပါ။
- လကျခလယျက ဦးနှောကျနဲ့ နှလုံးသှေးကွောစနဈ အလုပျ လုပျပုံနဲ့ ဆကျစပျနေ ပါတယျ။ လကျသူကွှယျပျေါမှာ လခွမျး မရှိခွငျးက သှေးကွောတှမှော ပွဿနာ ရှိနပွေီး သှေးဖိအား မြားနတောကို ဖျောပွတာပါ။
- လကျညှိုးပျေါက လခွမျး မရှိတော့ရငျ၊ ဒါမှမဟုတျ အတျောကို သေးသှားရငျ အူ၊ ပနျကရိယ၊ နား၊ နှာခေါငျး၊ လညျခြောငျးတို့ အလုပျ လုပျပုံ မမှနျလို့ပါ။
- လကျမပျေါက လခွမျးက အဆုတျနဲ့ သရကျရှကျတို့ရဲ အလုပျလုပျပုံ ကောငျးမှနျ လို့ပါ။ လကျမပျေါက လခွမျးက အထငျရှားဆုံး ဖွဈပွီး လကျမရဲ့ 25 ရာခိုငျနှုနျးထကျ ပိုမကွီးသငျ့ ပါဘူး။ သှေးလှတျကွောမှာ သှေးတိုးလာတဲ့ အခါ လကျမပျေါက လခွမျးက သိသိသာသာ သေးသှားသလို သိသိသာသာ ကွီးလာတတျ ပါတယျ။
လခွမျးတှကေ လကျခြောငျးပျေါမှာ အလှနျကွီးလာခွငျးက နှလုံးသှေးကွောစနဈ၊ နှလုံးခုနျခွငျး၊ သှေးဖိအားနညျးခွငျး ပွဿနာ ရှိနတောကို ဖျောပွတာပါ။ လကျသညျးပျေါက လခွမျးကွီးတှကေို အားကစားသမားတှေ၊ ကိုယျကာယသုံးပွီး အလုပျ လုပျရသူတှမှော တှရေ့တတျပါတယျ။ အားကစားသမားမဟုတျဘဲ လကျသညျးပျေါမှာ လခွမျးအကွီးကွီး တှရေ့ရငျတော့ စိတျဖိစီးမှု မြားနလေို့ပါ။
လကျသညျးရဲ့အောကျဘကျမှာ လခွမျးပုံသေးသေးလေးမွငျရရငျ သှေးဖိအားနညျးပွီး သှေးလညျပတျမှု မမှနျကနျလို့ပါ။ ကိုယျခံအား နညျးတဲ့ အခါ သှေးတှငျး သကွားဓာတျနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွဿနာရှိတဲ့အခါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ ပိုတိုးလာတဲ့ အခါ လကျသညျးပျေါမှာ လခွမျးသေးသေးလေးကို မွငျရတတျပါတယျ။
ကလေးတှရေဲ့လကျသညျးပျေါမှာ လခွမျးလေးတှေ မမွငျရတဲ့အခါ အရမျးကွီး လနျ့မသှားပါနဲ့ဦး။ ကလေးတှမှော တဈခါတလေ လကျသညျးရဲ့ လခွမျးလေးတှေ မမွငျရတာ၊ အခြိနျကွာမှ ပျေါလာတတျတာလညျး ရှိပါတယျ။ တခြို့သူတှမှောကတြော့ လကျသညျးရဲ့ဖှဲ့စညျးပုံထူးခွားမှု ကွောငျ့လညျး လခွမျး မပျေါတတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လကျသညျးမှာ ရုတျတရကျ လခွမျးပြောကျသှားခွငျးက သှေးလညျပတျမှု မမှနျခွငျးကွောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
1. အလှနျအမငျး ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ အစာခမြှေု ကမောကျကမဖွဈခွငျး၊ အာဟာရဓာတျ ခြို့တဲ့ခွငျးတို့ ဖွဈတဲ့အခါ ခဲရောငျလခွမျးလေး ပျေါလာတတျပါတယျ။
2. ကနျြးမာတဲ့အခါ လကျသညျးပျေါမှာ အဖွူရောငျ လခွမျးလေး ပျေါလာတတျပါတယျ။
3. သှေးလညျပတျမှု အားနညျးတဲ့အခါ၊ ကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှနေဲ့ တဈရှူးတှမှော အောကျဆီဂငျြခြို့တဲ့တဲ့အခါ ခရမျးရောငျ လခွမျးလေး ပျေါလာတတျပါတယျ။ မူးခွငျးနဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး လညျး ရံဖနျရံခါ ဖွဈတတျပါတယျ။
4. ပနျးရောငျ(အနီရောငျ)လခွမျးက အဆုတျမှာ ပွဿနာရှိနတေဲ့ အခါ ပျေါလာတတျပါတယျ။
5. အနကျရောငျ လခွမျးကို တှရေ့ငျတော့ လုံးဝကို အန်တရာယျ ရှိနတေဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။ အားပွငျးတဲ့သတ်ထု အဆိပျသငျ့တဲ့ အခါလညျး ပျေါလာတတျပါတယျ။
လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးတွေ သတိပေးနေတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး (ရုပ်သံ)
လက်ချောင်းလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လက်သည်းရဲ့ အောက်ဖက် လခြမ်းပုံလေး တွေကို သင်သတိထားမိ မှာပါ။ လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးတွေရဲ့ အရောင်၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားက ရောဂါတစ်ခုရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ညွှန်ပြပေးနိုင်ရုံမကပဲ ရောဂါရဲ့ပင်ကို သဘောကိုပါ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးကို လုံးဝမမြင်ရတာ၊ မရှိတာက ကျန်းမာရေး ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာပါ။
- လက်သန်းပေါ်က လခြမ်းလေးက ကျောက်ကပ်၊ အူသိမ်၊ နှလုံးတို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လခြမ်းပိုပြီး ပေါ်လွင်လာခြင်းက သွေးတိုးခြင်းရဲ့ ရလဒ်ပါပဲ။
- လက်သူကြွယ်က မျိုးပွားခြင်းနဲ့ သွေးဖြူဥစနစ် တွေရဲ့ အလုပ် လုပ်ပုံနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။ လက်သူကြွယ်ပေါ်က လခြမ်းကို မြင်ရခဲ ပါတယ်။မြင်ရရင်တော အစာခြေမှု စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ ရှိလို့ပါ။
- လက်ခလယ်က ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသွေးကြောစနစ် အလုပ် လုပ်ပုံနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။ လက်သူကြွယ်ပေါ်မှာ လခြမ်း မရှိခြင်းက သွေးကြောတွေမှာ ပြဿနာ ရှိနေပြီး သွေးဖိအား များနေတာကို ဖော်ပြတာပါ။
- လက်ညှိုးပေါ်က လခြမ်း မရှိတော့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အတော်ကို သေးသွားရင် အူ၊ ပန်ကရိယ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတို့ အလုပ် လုပ်ပုံ မမှန်လို့ပါ။
- လက်မပေါ်က လခြမ်းက အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်တို့ရဲ အလုပ်လုပ်ပုံ ကောင်းမွန် လို့ပါ။ လက်မပေါ်က လခြမ်းက အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပြီး လက်မရဲ့ 25 ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမကြီးသင့် ပါဘူး။ သွေးလွှတ်ကြောမှာ သွေးတိုးလာတဲ့ အခါ လက်မပေါ်က လခြမ်းက သိသိသာသာ သေးသွားသလို သိသိသာသာ ကြီးလာတတ် ပါတယ်။
လခြမ်းတွေက လက်ချောင်းပေါ်မှာ အလွန်ကြီးလာခြင်းက နှလုံးသွေးကြောစနစ်၊ နှလုံးခုန်ခြင်း၊ သွေးဖိအားနည်းခြင်း ပြဿနာ ရှိနေတာကို ဖော်ပြတာပါ။ လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းကြီးတွေကို အားကစားသမားတွေ၊ ကိုယ်ကာယသုံးပြီး အလုပ် လုပ်ရသူတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အားကစားသမားမဟုတ်ဘဲ လက်သည်းပေါ်မှာ လခြမ်းအကြီးကြီး တွေ့ရရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှု များနေလို့ပါ။
လက်သည်းရဲ့အောက်ဘက်မှာ လခြမ်းပုံသေးသေးလေးမြင်ရရင် သွေးဖိအားနည်းပြီး သွေးလည်ပတ်မှု မမှန်ကန်လို့ပါ။ ကိုယ်ခံအား နည်းတဲ့ အခါ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာရှိတဲ့အခါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ပိုတိုးလာတဲ့ အခါ လက်သည်းပေါ်မှာ လခြမ်းသေးသေးလေးကို မြင်ရတတ်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့လက်သည်းပေါ်မှာ လခြမ်းလေးတွေ မမြင်ရတဲ့အခါ အရမ်းကြီး လန့်မသွားပါနဲ့ဦး။ ကလေးတွေမှာ တစ်ခါတလေ လက်သည်းရဲ့ လခြမ်းလေးတွေ မမြင်ရတာ၊ အချိန်ကြာမှ ပေါ်လာတတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့သူတွေမှာကျတော့ လက်သည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထူးခြားမှု ကြောင့်လည်း လခြမ်း မပေါ်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်သည်းမှာ ရုတ်တရက် လခြမ်းပျောက်သွားခြင်းက သွေးလည်ပတ်မှု မမှန်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
1. အလွန်အမင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အစာချေမှု ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း၊ အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်းတို့ ဖြစ်တဲ့အခါ ခဲရောင်လခြမ်းလေး ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
2. ကျန်းမာတဲ့အခါ လက်သည်းပေါ်မှာ အဖြူရောင် လခြမ်းလေး ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
3. သွေးလည်ပတ်မှု အားနည်းတဲ့အခါ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ တစ်ရှူးတွေမှာ အောက်ဆီဂျင်ချို့တဲ့တဲ့အခါ ခရမ်းရောင် လခြမ်းလေး ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ မူးခြင်းနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း လည်း ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
4. ပန်းရောင်(အနီရောင်)လခြမ်းက အဆုတ်မှာ ပြဿနာရှိနေတဲ့ အခါ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
5. အနက်ရောင် လခြမ်းကို တွေ့ရင်တော့ လုံးဝကို အန္တရာယ် ရှိနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ အားပြင်းတဲ့သတ္ထု အဆိပ်သင့်တဲ့ အခါလည်း ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။